China Ngwá Ọrụ Ịgba Ngwá Ọrụ 200w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ngwá Ọrụ Ịgba Ngwá Ọrụ 200w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ngwá Ọrụ Ịgba Ngwá Ọrụ 200w)
200W UFO Diana Elu Bay
200W UFO Diana Elu Bay 1. Ụlọ ọrụ factory 200W mere ka ọkụ dị n'ebe ndịda Africa ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. 200W ada UFO highbay IP65 waterproof maka n'èzí eji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ebube ọkụ ụlọ nkwakọba ihe 200W bụ...
Ngwá ọkụ ntanetị ọkụ nke Gas Station 130w
Ngwurugwu anyị maka oge ìhè bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na ntanye ọkụ nke a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ebube ọkụ na-eburu ya nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ike Igwe Mmiri anyị maka Gas Station 130w bụ slim design slim na-achọ, dị...
150W High Bay na-arụ ọrụ igwe Ngwá Ọrụ Mgbaaka
The High Bay Fixture Nko 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Nnukwu Ihe Mgba Eji Elu anyị 150W nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube echichi maka nke a bụ High Bay Industrial Lights bụ 5-7m. Nke a dị elu n'ọnụ mmiri Mercury vapo bụ EC ROHS ETL DLC. Eji ọkụ ọkụ mercury dị elu mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ...
Ngwá Ọrụ Ịgba Ngwá Ọrụ 200w Ngwá Ọrụ Ịgba Ngwá Ọrụ 200W Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ 150w Ngwá Ọrụ Ndị Ngwá Agha Akụrụngwa Ngwá Ọrụ Ledar Akụrụngwa Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Ogwe Gas Ga-eme Ngwá Ọrụ 130w Ngwá Ọrụ Ụlọ Ahịa